‘युरोप–अमेरिकासम्म सवारी चलाउन इम्बोस्डमा अंग्रेजी राखिएको हो ?’
 हाम्रा सवारीसाधन त मेची–महाकालीभित्रै चल्ने भएकाले इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै
 इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली भाषालाई दिइनुपर्छ
 अदालतमा पुग्नुपर्ने विषय नै होइन, इम्बोस्डमा नेपाली भाषा हुनैपर्छ
 भाषाको पहिचान नै मेटिने निर्णय अमान्य
यस सम्बन्धी मुख्य रिपोर्ट पढ्नुहोस्: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा भाषा विवादः नेपाली अनिवार्य, अंग्रेजी ऐच्छिक !
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णय विवादित बनेका छन् । केही समयअघि इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा लागू गर्ने सर्वोच्चको आदेश पनि विवादमा तानियो । यतिबेला रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने फैसलाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चले भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत असंवैधानिक फैसला गरेको ठहर गरिएको छ । नागरिक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी, भाषाविद्, जनप्रतिनिधिलगायतले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला राष्ट्र र राष्ट्रियताविरुद्ध भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिलाई ‘इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा राख्ने सर्वोच्चको आदेश कस्तो लाग्छ ?’ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो । प्रस्तुत छ जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया -
इम्बोस्डमा अंग्रेजी असान्दर्भिक
पम्फा भुसाल, नेकपा
मैले फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न पाएकी छैन । तर इम्बोस्ड नम्बर रोमन लिपिमा हुने कुरा समाचार पढेर थाहा पाएकी हुँ । इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषमै लेखिनुपर्छ । हाम्रा सवारीसाधन त मेची–महाकालीभित्रै चल्ने हुन्, विदेशमा चल्ने होइनन् त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै हुनुपर्छ ।
नेपालभित्रै चलाइने सवारीको इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने कुरा असान्दर्भिक छ । हाम्रा सवारीसाधन युरोप–अमेरिकासम्म चलाउने हो भने इम्बोस्ड नम्बर अंग्रेजी भाषामा लेख्दा खासै फरक पर्दैन ।
भाषा संरक्षणको दायित्व
चेतनाथ सञ्जेल, प्रदेशसभा सदस्य
इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै राखिनुपर्छ । सबैले अंग्रेजी बुझ्दैनन् । जुन उद्देश्यले रोमन लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न खोजिएको छ, अंग्रेजी भाषाबाट त्यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यस्तै, राज्यले भाषा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सनुहुँदैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली भाषालाई नै दिनुपर्छ । इम्बोस्ड नम्बरमा रोमन लिपि प्रयोग गर्ने कुरा उचित छैन, यसमा नेपाली भाषा नै प्रयोग गरिनुपर्छ ।
पहिचान मेट्ने निर्णय !
पदमकुमारी गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य
मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी धारणा राखेकी छु । सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल, नेपाली र भाषाको पहिचान नै मेटिने गरी निर्णय भयो, जुन जायज होइन । अन्य देशले पनि आफ्नै भाषामा इम्बोस्ड नम्बर राखेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थामै सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाको चलन भएको हुँदा इम्बोस्ड नम्बर नेपाली भाषामै हुनुपर्छ ।
अदालतमा पुग्नुपर्ने विषय नै होइन
सरिता खड्का, प्रदेशसभा सदस्य
नेपाली भाषाको पहिचान नै मेटिने गरी निर्णय भयो । यसरी नै नेपाली भाषामाथि हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने देशको पहिचान केही बाँकी रहँदैन । बालबालिकादेखि बूढापाकाले समेत पढ्न, चिन्न र बुझ्न सक्ने भनेकै नेपाली भाषा हो । यसलाई हटाएर विदेशी भाषा राख्नुको महत्त्व खासै केही छैन । आफ्नो भाषा, संस्कृति र लिपिको पहिचान नै गुम्न गरी निर्णय गर्नुहुँदैनथ्यो ।
कोरोना महामारीका कारण आधिकारिक फोरममा यस विषयलाई उठाउन पाइएको छैन । तर यो अदालतमा पुग्नुपर्ने विषय नै होइन । अदालतमा कसरी पुग्यो ? विवाद गर्नुपर्ने विषय नै होइन ? इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा राख्न प्राविधिक हिसाबले अप्ठ्यारो पर्दा त्यसलाई मिलाएर जानुपर्छ । प्रविधिअनुकूल भएन भनेर आफ्ना पहिचान मास्दै मास्दै जानु उपयुक्त भएन । बरु आफ्नो भाषा सुहाउँदो प्रविधिको विकास गर्नतर्फ पो लाग्नुपर्छ ।
‘अब जनताले सर्वोच्चको इम्बोस्ड नम्बरसम्बन्धी फैसला उल्ट्याइदिन्छन्’- कानुन व्यवसायी भन्छन्
‘फैसला होइन, अदालतलाई अचानो बनाएर गरिएको कीर्ते लेखोट’- अभियन्ताहरु भन्छन्
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ १८:३५